တႈမၚလၚကပီၚပွၚစီဆွံ St. John Chrysostom လါစဲးတ့ဘ႕ႈ ၁၃ သီ | Radio Veritas Asia
တႈမၚလၚကပီၚပွၚစီဆွံ St. John Chrysostom လါစဲးတ့ဘ႕ႈ ၁၃ သီ
တႈမၚလၚကပီၚ ပွၚစီဆွံ St. John Chrysostom လါစဲးတ့ဘ႕ႈ ၁၃ သီ
ပွၚစီဆွံစီၚဎိၚဟဥ ခရံဏစိးစတိ အတႈကတိၚတနီၚ
Some Words Of St. John Chrysostom
Feast Day = September 13
ပွၚစီဆွံခရံဏစိးစတိ မ့ႈပွၚတဂၚလ႕အအိဥဒီး တႈသ့တႈဘဥလီၚတိၚလီၚဆီ၀ဲလ႕ တႈစံဏတဲၚတဲလီၚတႈအဂီႈအဃိ ဒိးနဥ့ဘဥ၀ဲအမံၚလ႕အအိဥဒီးအခီပညီ လ႕အမ့ႈ ပွၚလ႕အအိဥဒီးထးခိဥထူ (Golden Mouthed) နဥ့လီၚ။ မ့ႈပွၚလ႕အကဟုကဎဏ ကြႈထြဲမၚစ႕ၚပွၚဖွီဥဖိဎဏဖိယ က်ဲးစ႕ၚမၚသီထီဥက့ၚတႈလ႕ သီဘူဥသီခါ ( Reform Of The Clergy) အဂီႈနဥ့လီၚ။ မ့ႈပွၚလ႕အခိးကြႈပ႕ဆွ႕ ပွၚစံဏတဲၚတဲလီၚတႈ (Patron Of Preachers) နဥ့လီၚ။ တႈမၚလၚမၚကပီၚပွၚစီဆွံအံၚအမုႈနံၚ မ့ႈ၀ဲဖဲ လါစဲးတ့ဘ႕ႈ ၁၃ သီ အမုႈနံၚနဥ့လီၚ။ လ႕တႈတိဏနီႈလူၚပိဏထြဲတႈအဂီႈ ပွၚစီဆွံအံၚအတႈကတိၚတနီၚမ့ႈ၀ဲ ”””
နမ့ႈတသ့ထံဥခရံဏကစႈ လ႕ပွၚလ႕အဃ့အီဥတႈသ့ဥတဖဥ ဒ္ပထံဥဘဥအအိဥ၀ဲလ႕ တႈဘါသရိဏအပဲႀတီအခိဥအဃ႕ၚဘဥဒီး ပတသ့ထံဥနဥ့ဘဥခရံဏကစႈလ႕ လီခီအပူၚဘဥနဥ့လီၚ။
မ္ပွၚစီဆွံသ့ဥတဖဥအမံၚအသဥ ကႏုႈလီၚ၀ဲဆူပဟံဥပူၚဃီပူၚ ခီဖ်ိပတႈဟံးနဥ့ ပွၚစီဆွံသ့ဥတဖဥအံၚအမံၚဒီး ဒုးမၚနဥ့ဖိသဥသ့ဥတဖဥအံၚ လ႕ပွၚစီဆွံသ့ဥတဖဥအမံၚ အသိးနဥ့တက့ႈ။ ပသုတဘဥဆိကမိဥဆံး တႈဂ့ႈအံၚတဂ့ၚ။ အအံၚမ့ႈတႈလ႕အအိဥဒီး တႈပညိဏလ႕ တႈဆီဥထြဲမၚစ႕ၚပွၚအဂီႈနဥ့လီၚ။
ပတႈစံးတႈကတိၚတႈ ကမ့ႈ၀ဲတႈလ႕ အတီ၀ဲလိၚ၀ဲဘဥဆဥ ပမ့ႈစံးကတိၚအီၚလ႕ တႈသူဥဒိဥသးဖ်ိးအပူၚဒီး ကကဲထီဥ၀ဲပတႈမၚဟးဂီၚတႈ ကိးမံၚဒဲးနဥ့လီၚ။
သုတဘဥမဲဥဆွးလ႕ သုကႏုႈလီၚ၀ဲဆူ တႈဘါသရိဏအပူၚတဂ့ၚ။ မဲဥဆွးလ႕ သုမၚတႈဒဲးဘၚအဃိနဥ့တက့ႈ။ တဘဥသုမဲဥဆွးလ႕ သုပီႈဎဏလီၚက့ၚသုသးအဃိတဂ့ၚ။ တႈအိဥခံမံၚ ဒီးမ့ႈ၀ဲ တႈဒဲဘးဒီး တႈပီႈဎဏလီၚက့ၚသးနဥ့လီၚ။ တႈဒဲးဘး မ့ႈ၀ဲတႈဘဥဒိဘဥထံးယ တႈပီႈဎဏလီၚက့ၚသး မ့ႈ၀ဲကသံဥကသီနဥ့လီၚ။ ဒ္ပနီႈခိ အိဥ၀ဲဒီးအတႈပူၚလီႈ ဒီးကသံဥကသီလ႕တႈပူၚလီႈအံၚအဂီႈအသိး လ႕နီႈသးအဂီႈ ပအိဥဒီးတႈဒဲးဘး ဒီးတႈပီႈဎဏလီၚက့ၚသးနဥ့လီၚ။ ဘဥဆဥယ တႈဒဲးဘး ဒုးမၚနဥ့ပွၚတႈမဲဥဆွးယ မ့မ့ႈ တႈပီႈဎဏလီၚက့ၚသး ဒုးမၚနဥ့က့ၚပွၚ တႈသူဥဒူသးဒူနဥ့လီၚ။
မါဒီး၀ၚ အတႈအဲဥလိဏအသး မ့ႈ၀ဲတႈဂံႈတႈဘါလ႕အ ကရ႕ကရိသ့ဥတဖဥ အတႈပဏဖွိဥဃူဖိးလိဏသး အဂီႈနဥ့လီၚ။ ဖဲတႈဃူတႈဖိး ဒိဥစိဒိဥကမီၚအခါ ဖိသဥသ့ဥတဖဥကဘဥတႈလုႈဒိဥထီဥအီၚ ဂ့ၚဂ့ၚဘဥဘဥယ ဟံဥဃီအတႈအိဥအသး ကမ့ႈ၀ဲလ႕ တႈႀက႕း၀ဲဘဥ၀ဲအပူၚယ ပဘူးပတံဥယပတံၚသကိးယ ပဒူဥဖိထ႕ဖိသ့ဥတဖဥ ကစံးထီဥပႀတ႕ၚ၀ဲ တႈအိဥအသးအတႈပိဏထြဲသ့ဥတဖဥနဥ့လီၚ။
ပသုတဘဥမ႕ဆူဥပွၚအဂၚ ဒ္သိးအကဘွီဂ့ၚက့ၚအသးဘဥဒီး ပကဘဥဟ့ဥသဆဥထီဥအခံ လ႕တကတိၚအမုႈနဥ့လီၚ။ ပတအိဥ၀ဲဒီးတႈစိတႈကမီၚလ႕ ပကဖီဥဃံးပွၚအဂၚဘဥဒီး ပကဘဥသ့ဥညါ၀ဲလ႕ ပကဘဥသူတႈသ့တႈဘဥလ႕ အအိဥဒီးပွၚနဥ့လီၚ။ ဎြၚဟ့ဥဘ်ဳး၀ဲခိဥသလုႈ ဆူပွၚလ႕အအိဥပူၚဖ်ဲး၀ဲဒီး တႈအ႕တႈသီ တမ့ႈလ႕တႈမ႕ဆူဥအီၚအဃိဘဥဒီး မ့ႈ၀ဲလ႕ပကစႈဒဥ၀ဲ ပတႈဃုထ႕ထီဥက်ဲလ႕အဂ့ၚ အဖီခိဥနဥ့လီၚ။
ဖဲနအိဥနဲလ႕ တႈလုႈလီႈအမဲဥညါ ဖဲခရံဏအိဥ၀ဲတႈလီႈအပူၚအခါ နသုတဘဥဆိကမိႈနဲလ႕ နအိဥနဲထဲဒဥဒီးပွၚလ႕နဃ႕ၚသ့ဥတဖဥ တဂ့ၚ။ သ့ဥညါနဲလ႕ မူခိဥကလူး လ႕အလီၚဂဏဒ္ မူခိဥအသုးမုႈသံဥဘိသ့ဥတဖဥ အိိဥ၀ဲလ႕နကပၚ ဎူးဎီႈပဏကဲ၀ဲ မူခိဥဟီဥခိဥတႈဒိဥကစႈလ႕ အအိဥဒီးတႈစိတႈကမီၚ အပူၚနဥ့လီၚ။ အဃိ ဖဲနအိဥလ႕တႈဘါသရိဏအပူၚအခါယ အိဥနဲလ႕ တႈဘွဥ့တႈဘွီဥယ တႈပ်ံၚဎြၚယ တႈဎူးဎီႈပဏကဲဎြၚအပူၚနဥ့တက့ႈ။
PHOTO CREDIT: stjohnswarren.com
TO VIEW VIDEO: PLEASE CLICK THE POST BELOW OR CLICK THE PICTURE BELOW
သိမ္ဆိပ္ သီခါကေိခိဥ (Stanislaus Minko) တဲးဖ်ါထီဥ၀ဲ တႈဎူးဎီဥပဏကဲထူဥစုညါဘူဥနံၚဖးဒိဥအဂ့ႈ’(၂၉/၄/၂၀၁၉)
တႈသံကြႈသမံသမိးဃုဏဒီးသီခါ (လီရ့ဥစ္ က်ါလား) လ႕အတႈအိဥဖွိဥဟီဥက၀ီၚ လ႕(၀ဥ)ကီႈ တႈအိဥသးအဂ့ႈ.(၂၉/၄/၂၀၁၉)
တႈထံဥလိဏသမံသမိးဃုဏဒီးပႈဒိဥ (Msgr. Maurice Nyunt Wai ) လ႕အတႈဒိးန႔ႈ သီခါအလီႈအလးပွဲၚထီဥ(၃၀) ၀ီတ၀ီ အနံဥဆဲးဆ႕ႈ အမုႈနံၚန႔ဥလီၚ(၈ယ၄ယ၂၀၁၉)
တႈသံကြႈသမံသမိးတႈဒီးပႈဒိဥ (ဟဲနရံၚ အိုင္ခလိန္) ဘဥဃးဒီး အတႈဒိးန႔ႈ သီခါလီႈလးပွဲၚထီဥ(၃၀)၀ီတ၀ီအမုႈနံၚဆဲးဆ႕ႈ.(၂၉ယ၃ယ၂၀၁၉)